Landa imephu kwaye uhlele indlela usebenzisa i-BBBike-Geofumadas
NgoDisemba, 2017 Google umhlaba / imephu
BBBike sisicelo esona sinjongo esona sikhulu ukubonelela ngeendlela zokuhamba, usebenzisa ibhasikidi, kwisixeko kunye neenxa zonke.
Senza njani umcwangcisi weendlela?
Enyanisweni, ukuba sifaka indawo yakho Kwiwebhu, into yokuqala eboniswa kuthiyo uluhlu lwamagama ezixeko ezihlukeneyo, apho kunokwenzeka ukuba ukhethe enye yazo ngokusebenzisa iqhosha le mouse.
Njengoko ubona, uluhlu lweedolophu eziza kulukhetha luvela kubonakala. Xa ukhetha omnye wabo, sifaka isikrini esisivumela ukuba sichaze indlela yethu. Masithi sakhetha iLondon (eLondon):
Emva kokuba indlela ichazwa, ingxelo ngedatha efunekayo ifumaneka:
ICEBISO: Qaphela ukuba phezulu window enkulu unxibelelwano oluluhlaza luvela, apho "into" ikhutshwe kwifomati ye-kml, iya kuba yintoni?
I-BBBike ifakwe njani?
Basitshela ukuba zikhona ezimbini iinguqulelo I-BBBike, "i-web based based", (esiyibonayo) kunye "nabazimeleyo" ukukhuphela. Kwimeko yokugqibela, kufanelekile ukufunda maxwebhu enokufumaneka ngokuchofoza ukhetho "Nceda"Ukusuka kwimenyu ekhoneni elingezantsi lasekhohlo le window ephezulu:
Kukho nekhompyutheni yeselula, kodwa, siyaphinda sithethe, kulungele ukufunda maxwebhu ngaphambili.
Ziziphi iimpawu ezibalulekileyo zeBibBike?
Ukusuka kulokho kubhalwe kulo maxwebhu, sikhankanya:
Kubandakanya ngaphezulu kweedolophu ze-200 emhlabeni jikelele.
Uncedisa ngaphezu kweempawu zeemephu ze-17 (ngezohlu ezahlukeneyo) OpenStreetMap, Google, kunye neBing.
Ukukwazi ukuthumela izinto zeGPS njengeGPX okanye iKML
Iingxelo eziprintwe kwifomathi yePDP okanye zigcinwe kwifowuni
Ukuhlaziywa kwedatha esuka kwi-OpenStreetMap ngeveki nganye.
Yintoni iB BBBike?
I-BBBike iye yaphuhliswa ukudala izicwangciso zendlela yokuhamba emifutshane, phakathi kwe-5 kunye neekhilomitha ezili-15, ezinokubaluleka kwayo ukuhamba ngebhayisikili. Hayi Kujoliswe njengoncedo lokuhamba okanye ukuhamba.
Ziziphi izixhobo ezenza iBBBike?
Ukuba sikhetha ukhetho "izixhobo"Kusuka kwimenyu esemqoka, sifaka iskrini esitsha esichaza izixhobo ezenza le sicelo:
Siza kubhala ngokucacileyo, ngokubanzi, ulwazi malunga nezixhobo:
a) Isicelo seBibBike
Le yenye indlela yokukhuphela oko kuthiwa "inguqu oluzimeleyo". Sincoma ukuba sizithobele iinkcukacha kunye nendlela yokujonga izixeko. Ukuba silanda kwaye sifaka 'inguqu emele' siya kufumana into enje. Kukho iilwimi ezimbini kuphela ezikhoyo: isiJamani kunye nesiNgesi.
La maxwebhu Kwakhona kubonisa imiyalelo emibini esinokuyisebenzisa kuxhomekeke kwimeko:
b) Iseva ye-tile yeBBBike
Sebenzisa umsebenzisi wakho womfanekiso womnatha. Imephu iboniswe ifumaneka kwisitayela mapnik. Lona sicelo esikuvumela ukuba ukhangele iimaphu kunye nomgangatho omhle wesithombe usebenzisa i-mapping algorithms ngokukhawuleza ukumela.
c) Imephu Qhathanisa
Esi sixhobo sidalwe Geofabrik. Inguqu yakutshanje yale sixhobo isekela kwiimephu ze-52 kwesikrini kunye nemimoya yesikrini esigcwele.
d) I-OpenStreetMap inkonzo isusiwe
Ivumela iindawo zokukhupha ezinobungakanani obukhulu be-960,000 km2, oko kukuthi, indawo engxandekileyo ye-1200 km nge-800 m malunga. Xa sifaka okokuqala ngqa, ibonisa umfundisi omncinci wokusebenzisa le sixhobo:
Apha siyakwenza oku:
Indawo efunwayo. I-crux yalo mbandela. Ewe, njengoko ubona, imephu iboniswe kwiwebhusayithi ngokungagqibekanga Yiloo eBerlin kunye neenxa zonke. Kwenzeka ntoni ukuba sifuna esinye isixeko? Isihluthulelo se "Bonisa ibhokisi lebala kunye nebala":
Yiyiphi, xa isebenze, ibonisa ibhokisi elifunayo:
Ifomati ezifumanekayo. Qaphela ngokugqithisileyo uluhlu lokuhlahla. Nantsi ifom ye-kml ayibonakali. Ukuqwalasela ...:
IINKCUKACHA ZOKUBHALA. Kwimeko yokungazi i-coordinates yendawo ofuna ukuyifaka ngayo imephu, mhlawumbi ngenxa yokuba iqala ngokusemthethweni, okanye ngenxa yokuba uye wacinga indawo engachangekanga, unyathelo eliphambili liya kuba:
- Khangela kwiGoogle izilungiso zendawo oza kusebenza ngayo.
- Kukhethwa ukuba usebenzise ixabiso lebala nelokuhamba kunye nawe mqondiso (ukuba unayo) kunye solo ngeqondo lokugqibela. Ungasebenzisi izixabiso ngemizuzu kunye nemizuzwana. Faka amanani amabini kwinqanaba lokuqala (Ngaphantsi-ngaphantsi) kwaye ususe "1" okanye "2" kwindawo yokuqala yedatha yexabiso elifanayo ukungena kuwo kumgca wesibini (ekhoneni eliphezulu)
- Landela amanyathelo oqeqesho olubonelelwe yinkqubo (jonga imizila engentla). Emva komzuzwana, umnxibelelwano wokukhuphela uza kufumana i-akhawunti yakho ye-imeyile. Umzekelo okhawulezayo:
Kwi-BBBike: Kuphela kufuneka "uhlale" kwindawo ekufuneka isetyenziswe ngayo:
- Cinezela iqhosha "isicatshulwa"Kulungile!
e) isibuko seplanethi
El indawo yokukhuphela I-BBBike inikeza idatha ye-OpenStreetMap iPlaneti epheleleyo kwifomathi ye-XML OSM kwakunye nefomathi yebhanti ye-protocolbuffer. Kwakhona kubandakanya izicatshulwa ezivela kwiidolophu ze-200 nakwiindawo ezijikeleze ihlabathi.
Ezi ziyi-strokes, ngolwazi olubanzi malunga neBobBike. Ukuba ufuna ukuzama, unganqikazi ukukhuphela i-"yedwa" inguqu ngokutyelela Kwiwebhu yesicelo. Khangela ixesha elizayo!
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaba kufuneka sithathe indawo yegama elithi "Geomatics"?
Post Next Umbhalo omtsha we-BIM: BIM ngolwimi olululaOkulandelayo "